I-Huawei WiFi AX3, umzila okufanele ube nawo ukuze uthuthukise ukuxhumana kwakho | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 09/07/2021 13:00 | Ukuzenzakalela kwasekhaya, Gadgets, Ikhaya, Izibuyekezo
El I-WiFi 6 Kuya ngokuthandwa, amadivayisi amaningi aphezulu asevele eyifakile kusukela ngonyaka odlule futhi iya ngokuya iba khona nasemakhaya ethu. Kodwa-ke, lawo ma-routers amadala izinkampani "asinika wona" akude nokunikeza isipiliyoni se-premium kulokhu.
Sihlaziya i-Huawei WiFi AX3, indawo efanelekayo yomzila we-opharetha yakho ene-WiFi 6 nokusebenza okumangazayo. Ake sibone ukuthi ungayithatha kanjani i-WiFi yakho yasekhaya iye ezingeni elilandelayo futhi uthuthukise ulwazi lwakho lwe-inthanethi jikelele ngalo mkhiqizo we-Huawei ongabizi kakhulu.
Cishe cishe njalo, sinqume ukwenza ividiyo ongabheka kuyo ukungabikho ibhokisi le-Huawei WiFi 6 leyo ungathenga kusuka kuma-euro angu-59,99 ku-Amazon. Ungaphuthelwa ukuhlaziywa esiteshini sethu YouTube ngoba sikukhombisa nokuthi ungayimisa kanjani ngokushesha. Sishiyele imibuzo ebhokisini lokuphawula, sizojabula ukukusiza futhi usivumele ukuthi siqhubeke nokukhula futhi sikulethele ukuhlaziywa okuhle kakhulu.
1 Design: Minimalism light years away from the opharetha
2 Izici zobuchwepheshe: I-WiFi nenethiwekhi "ephezulu"
3 Ukufakwa nokumiswa
4 Ukuhlolwa kwethu nokuhlangenwe nakho komsebenzisi
Design: Minimalism light years away from the opharetha
Siqale ngokwakhiwa, ake sibhekane nakho, lokhu IHuawei WiFi AX3 Kusekukhanyeni kweminyaka kude ne-opharetha 'opharetha, inezimo ezinama-angled amancane kakhulu. Izimpondo ezine zangemuva ziyahlehleka futhi singazibeka kurutha uma sifisa.
Mncane kakhulu kangangokuba uyahlaba umxhwele, noma inobuqili obuthile, iphakanyiswa ngemuva. Yakhiwe ngopulasitiki omhlophe we-matte, ivimbela izigxivizo zeminwe futhi ayikhombisi uthuli, ubukhazikhazi. Sine-LED ekhombisayo ngaphambili nenkinobho emaphakathi yokuxhuma ne-Huawei Link. Okwangemuva Sishiya ukuxhumana kwe-WAN okuzohlinzeka inethiwekhi ku-router, ichweba lamandla, inkinobho ye-On / Off namachweba amathathu we-LAN. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi ikhona elifanele ngaphambili kwe-router yindawo ye-NFC yokuxhuma amadivayisi we-Huawei ku- «plis».
Izici zobuchwepheshe: I-WiFi nenethiwekhi "ephezulu"
Siyazi vele ukuthi yinhle, kepha manje kuza okuthile mhlawumbe okubaluleke kakhulu kunokwedlule, yini efihla ngaphakathi? Siqala ngokukhumbula ukuthi le Huawei WiFi AX3 ithengiswa ngokuhlukahluka okubili, i-dual-core ne-quad-core. Ngenxa yomehluko wentengo, ngincoma ngobuqotho inguqulo ye-quad-core, okuyiyona esiyihlaziya njengamanje. Amachweba amathathu angemuva yiGigabit Ethernet ngakho-ke umkhawulokudonsa we-1.000 Mbps uyaqinisekiswa.
Ezingeni lokuphepha, sinokusekelwa kwephasiwedi I-WPA3 ngakho-ke singakwabela kuleli zinga, uma sifisa. Mayelana ne-WiFi, sinesilinganiso WiFi 6 con 802.11ax / ac / n / a 2x2 no-802.11ax / n / b / g 2x2 kanye ne-MU-MIMO, akukho okunye futhi akukho okuncane. Iprosesa eshayela konke lokhu i- IGigaHome Quad-Core 1,4 GHz okuzoba nesibopho sokusabalalisa isignali ngokukhalipha, kanye nokusivumela ukuthi sijabulele izici zohlelo lokusebenza lweHuawei's Life esizokhuluma ngalo ngokuhamba kwesikhathi. Ukuphela kwento esele ishiwo, yize sesikhulumile ngayo, ukuthi sine-NFC esisekelweni sayo.
Ukuyifaka sinayo izindlela ezimbili esikushiya ngazo ngezansi:
Vala amanethiwekhi we-WiFi womzila wethu we-opharetha bese uxhuma ikhebuli ye-Ethernet nge-LAN port 1 yomzila we-opharetha kanye nechweba le-WAN le-AX3. Ngale ndlela, sizongena esikhundleni senethiwekhi ye-WiFi yomzila we-opharetha naleyo yomzila wethu we-AX3, kodwa isisindo senethiwekhi sizoqhubeka sithwalwa ngesika-opharetha.
Faka i-router yethu ku-"mode bridge" bese uxhuma kusuka ku-LAN 1 yomzila we-opharetha uye ku-WAN ye-AX3. Ngale ndlela, umzila we-opharetha "weqiwe" futhi usebenza njengebhuloho phakathi kwekhebula le-fiber optic ne-AX3 router yethu, ngakho-ke ukuxhumana kuzoncika ngokuphelele ku-AX3.
Sikhethe inketho yesibili, okuthile okuyinkimbinkimbi kepha okuqinisekisa ukuzimela ngokuphelele kumzila wakudala wenkampani, ukuqinisekisa, noma okungenani ukuzama, ukuthi sinokulibaziseka okuncane kokuxhumana, okulungele ukudlala imidlalo.
Manje simane sixhuma kunethiwekhi ye-AX WiFi3 futhi sizolandela uchungechunge lwezinyathelo ezizosiqondisa ukwabela iphasiwedi, igama nakho konke esikufunayo. IHuawei yenza kube lula kangangoba ayikufanele ukuchazwa. Okufanelekile ukulanda uhlelo lokusebenza lwe-AI Life lweHuawei (I-Android / iOSLokho kuzosivumela:
Lawula ukuthi imaphi amadivayisi axhunyiwe futhi unikeze amagama wokukhomba kuwo
Khawulela ukulanda / ukulayishwa kwedivayisi ngayinye exhunywe ngesandla
Sungula uhlelo lokulawula lwabazali oluthuthukile
Dala amanethiwekhi we-WiFi yezivakashi
Setha isibali sikhathi se-WiFi
Xilonga inethiwekhi yethu
Vula / vala inkomba ye-LED
Sebenzisa iwizadi yokusebenziseka kwenethiwekhi ye-WiFi ezenzakalelayo
Vuselela futhi uphathe i-AX3
Ngaphandle kokungabaza Aplicación kuyisinyathelo esisodwa ukuqhubekela phambili, umngane ophelele oguqula ulwazi lube uhlelo oluphelele.
Ukuhlolwa kwethu nokuhlangenwe nakho komsebenzisi
Kade sihlola i-AX3 ngenethiwekhi elinganayo engama-600/600 Mbps esuka ku-O2 (Telefónica) kumodi yebhuloho, njengoba kushiwo ngenhla. Kulokhu sisebenzise amadivayisi ahambisana ne-WiFi 6 ejwayelekile, njengeMacBook Pro neHuawei P40 Pro. Ngasikhathi sinye sinamadivayisi we-IoT azungeze ama-30 axhunywe phakathi kwezipikha, izinto zokuhlanza umshini, izibani ezihlakaniphile kanye ne-automation yasekhaya jikelele.
Inethiwekhi ye-2,4 GHz: Kulesi simo, isivinini asizange sibe ngcono esithuthukisiwe, uhla lukhawulelwe impela futhi lunikeza cishe imiphumela efanayo ne-router yomqhubi, noma kunjalo, ngokungafani neyangaphambilini, inethiwekhi ayikaze igcwale noma idunule ukusebenza kwedivayisi, le AX3 iyakwazi ukuphatha ukuxhumana okungaphezu kuka-150 ngasikhathi sinye, futhi iyakhombisa.
Inethiwekhi ye-5 GHz: Kulokhu sibonile ukuthuthuka okuphawulekayo ngokuya ngasembozo nangejubane, kufinyelela isivinini esimaphakathi esingu-550/550 Mbps
Ukubuyekezwa kwe: Miguel
Kuthunyelwe ku: 9 de julio de 2021
Ngokuvamile, ulwazi luthuthuke ngokuphawulekayo kusetshenziswa umzila weHuawei AX3 kuphela nokushiya opharetha kwimodi yebhuloho, ngakho-ke sincoma, ikakhulukazi uma njengami une-IoT eningi noma amadivayisi we-home automation ekhaya, ucabanga ukuthatha igxathu eliya phambili kulokhu. Intengo yayo icishe ibe ngama-euro angama-50 ngokuya ngephuzu lokuthengisa lapho kunikezwa, okuvame ukuba yinto ejwayelekile, ngakho-ke angikwazi ukuthola isizathu esisodwa sokuqhubeka nokugcina lokho kwe-opharetha.
Idizayini ebabazekayo nezinto ezikhethwe kahle
Ukusetha okulula nohlelo lokusebenza lwe-AI Life
Intengo engenakuhlulwa ngokoqobo
Ngiphuthelwa okuthile ngaphezu kwesilinganiso
Akubandakanyi ikhebula le-CAT 7 okungenani, kepha i-CAT 5e
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ukuzenzakalela kwasekhaya » I-Huawei WiFi AX3, umzila okufanele ube nawo ukuze uthuthukise ukuxhumana kwakho